Izinzuzo Of Solar Powered Ujantshi Crossing Signals Futhi Road Signs | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ukuhamba Ngezitimela > Izinzuzo Of Solar Powered Ujantshi Crossing Signals Futhi Road Signs
Izinzuzo Of Solar Powered Ujantshi Crossing Signals Futhi Road Signs
Industrial Engineering, Ukuhamba Ngezitimela
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 31/03/2020)
Umkhuba ezikhulayo ekubeni ngaphezulu imvelo uye kwaqubula eminingi, futhi nhlobonhlobo imizamo oluhlaza emhlabeni jikelele, emadolobheni amakhulu nasemadolobheni amancane ngokufanayo. Omunye izimpawu eziningi lokhu ukwanda kokusetshenziswa kwezindlela ophinde uvuseleleke ekuphileni kwansuku zonke kwabantu futhi umsebenzi sphere ke zazingakaze kubhekwe inketho phambi. Enye yalezo zindawo ukuphepha emgwaqeni, lapho iyasetshenziswa konke kusuka izimpawu zomgwaqo ukuze amarobhothi kumasistimu okuwuphawu, okwenza izimo komgwaqo kubonakale kakhulu ngesikhathi lentengo eliphansi, futhi ukulondoloza kokubili imali and the planet in the process.
Nakuba izimpawu endleleni akudingeki ngempela ukuba ovuthayo ukuba yenze umsebenzi wayo, Izibani nakanjani babe kunenye inzuzo yokwenza Abashayeli bazi kabanzi. izimpawu zomgwaqo Solar-sikagesi ifakwe izibani LED ukunikeza indlela ukubonakala kangcono, kokubili emini nasebusuku (Ungathola ulwazi oluthe xaxa mayelana nezimiso zabo zokusebenzela lapha) Zinikeza ububanzi ezinhle op ngisho ngesikhathi nokhahlo sezulu izimo okuvame ukudala izimo elimala. Kungakhathaliseki indawo yabo - at ezimpambanweni, kwakuphambana noma ujantshi yokuwela, these signs ensure greater safety for pedestrians and vehicles alike.
Izinzuzo Main Of Solar-Powered Road Signs
Inzuzo enkulu futhi inzuzo yalezi zimpawu ezingenhla Kuyaphawuleka ukuthi amandla ukuthi uyazondla akuveli evutha zokubasa ezimbiwa phansi. Akukona nilingcolise ngendlela ukuthi amalahle, uwoyela, negesi do, okwenza kube 100 amaphesenti imvelo. Isimo kuphela amahora ngokwanele libalele ukuze kwelanga ukuvunwa, iguqulwe futhi agcinwe ukusetshenziswa engu-eside. Njengoba olukhohlisayo njengoba lokhu imfuneko kungase kubonakale, kanye icala, ukufakwa ukonga ngempela ngenxa yozwela yayo ukunyakaza, okuyinto eyenza okuthunyelwe kanje isebenze kuphela uma kukhona traffic real endleleni, esikhundleni ubusuku nemini. Solar ukusetshenziswa amandla kuthiwa enezici futhi othakazelisayo ngempela, akuzona bona?
Njengoba lezi ukufaka kukhona ubushaye indiva, bathuthukisa ukuqaphela abashayeli abahamba ngezinyawo e ezithuthelayo, zokupaka, izindawo eziyingozi aziwayo ukuthi imbangela izingozi, njll. Iqiniso ukuthi asikho isidingo sezintambo noma umthombo kagesi eziseduze ukuze usebenze kwenza kube nokwenzeka ukuba uyibeke kuphi, ngaphandle iqiniso ukuthi kukhona ngempela izindleko eziphansi futhi ephansi yesondlo. Inzuzo eyengeziwe Kuyaphawuleka kulula ngakho ukufaka - kungaba unamathisele bangabanjwa noma okuthunyelwe unomphela noma omunye ophathekayo ukuhamba enkulu. Lokhu kwenza kwabo okukhulu phakathi elungisa umgwaqo, njengoba kungaba nibekezelela noma kususwa nhlobo isikhathi ngaphandle kokudala kokuphazamisa zokuhamba eziseduze.
Solar Ujantshi Signals
amasignali Ujantshi Ukunqamula ukuthi ukusebenzisa kwelanga amandla ingasetshenziswa kokubili esishintshashintshayo zezimboni nasemaphandleni. Imikhiqizo yalolu hlobo, njenge https://www.solarlightingitl.com/solar-railroad-crossing-systems/ detect approaching trains by virtue of wireless sensors, futhi uma they zuza isignali, zishukumisa izibani Ukunqamula futhi umsindo ezihamba ngezinyawo kuze isitimela isidlulile futhi kuphephile ukuwela amathrekhi. Lezi zimpawu ngokuvamile hamba ngababili ohlangothini owela isitimela ngasinye, futhi isixhumanisi engenantambo sekuqalile kubo ngaphakathi nangaphandle kwe-ngesikhathi esifanayo. Mhlawumbe into engcono mayelana kokufaka labo Kuyaphawuleka ukuthi azikho amabhokisi zangaphandle noma izintambo elide.
Lonke uhlelo uncika ilanga amandla ukuthi kwanele zokugcina 10 ama-iri wokusebenza ungaphazanyiswa kanye ligcwaliswe ngokuphelele kodwa has a isipele ibhethri, kufanele khona ukungabakhathaleli nhlobo elangeni lapho amandla zanqwabelana iphelile. Uhlelo futhi ngezinye izikhathi lisebenza kuphela uma izimfuneko ezithile zahlelwa ziyanakekelwa, ezifana isivinini ethize, lapho isitimela sisondela ihamba, Ngokwesibonelo. Kungaba elalakhelwe kuphela nomlilo alamu uma inani phezu 65 mph futhi uzibe traffic, kuhamba ngonyawo lonwabu kunalokho. Izinketho zihlukene.
Yize energy green engakaze ifakwe ngokugcwele ekuphileni umuntu ovamile kodwa, singabona khona kanye nokusebenzisa kwayo akhulise yilo ngomzuzu, ngokufaka sphere bayanda ukuphila. Kuyinto ngempela ikusasa lembulunga yethu futhi imele ngendlela ekhuthaza ukunakekelwa kwemvelo bayazi esifubeni intuthuko ngaphandle eminye kulimaza ibhalansi ethambile futhi usentekenteke ngokwemvelo osekuvele kwaphazamiseka uthintwe indoda. Solar-sikagesi komgwaqo kanye ujantshi izixazululo isibonelo esihle esisebenzayo, izicelo smart futhi engabizi insiza enhle engokwemvelo.
Thina obakhathalelayo imvelo futhi sithanda ubuciko ukuhamba. Qala ngokuzinikeza isikhathi lokubhuka uhambo isitimela Londoloza Isitimela, namuhla!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Izinzuzo Of Solar Powered Ujantshi Crossing Signals Futhi Road Signs” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsolar-powered-railroad-crossing-signal%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngo isixhumanisi esilandelayo, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, lokhu kuxhumana ukuze IsiZulu imizila amakhasi okufikela, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / pl ukuba / tr noma / es kanye ngezilimi ezingaphezu olikhethayo.
EcoFriendlyTravel GreenEnergy IndustrialEngineering RenewableEnergy SolarEnergy Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi